Shabdashikha समाचार |
Home » Archives by category » समाचार (Page 2)
‘बजारीकरणले साहित्यलाई ‘माल’ बनाउँदैछ’– आहुति
घोराही, ७ फागुन । ‘नयाँ घर’ लेखेर थुप्रैलाई ‘क्रान्तिकारी’ बनाएका आख्यानकार एवम् कवि आहुति शुक्रबार मदानीमा नेपाली साहित्यको गम्भीर चिन्तकका रुपमा देखिए । उनले कार्यक्रममा न त कविता सुनाए न कुनै कृतिको…
प्रलेस दाङले मनायो स्थापना दिवस
दाङ, पुस ३ । प्रगतिशील लेखक संघ, नेपाल दाङ शाखाले स्थापना दिवसको अवसरमा चार जना स्रष्टालाई पुरस्कृत गर्नुका साथै एकजनालाई सम्मान गरेको छ । संघले शुक्रबार घोराहीमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थापना…
प्रलेस दाङले पाँच स्रष्टालाई पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने
दाङ, मंसिर २० । प्रगतिशील लेखक संघ, नेपाल दाङ शाखाले यस वर्ष पाँच जना स्रष्टाहरुलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने भएको छ । संघले गठन गरेको प्रतिभा छनौट समितिको आइतबार घोराहीमा…
प्रलेसले २३ औं स्थापना दिवस मनाउने
दाङ, ५ मंसिर । प्रगतिशील लेखक संघ दाङ शाखाले आगामी पुस ३ गते आफ्नो २३ औं स्थापना दिबस मनाउने भएको छ । संघको आज शनिबार घोराहीमा बसेको बैठकले संघको २३…
को–को भए ‘चौथो राप्ती म्यूजिक अवार्ड- २०७१’ का विजेता ?
दाङ, मंसिर ४ । विगत चार वर्षदेखि अवार्ड वितरण गर्दै आएको रापती समाज काठमाडौंले राप्ती म्यूजिक अवार्ड २०७१ वितरण गरेको छ । दाङको सदरमुकाम घोराहीमा विशेष समारोहको आयोजना गरि समाजले…
साहित्यकार पोख्रेलको निधन
घोराही, १८ असोज । लामो समयदेखि साहित्य साधना र शिक्षण पेशामा संलग्न रहनुभएका साहित्यकार दामोदर पोख्रेलको आइतबार निधन भएको छ । फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित पोख्रेलको आइतबार बिहान १० बजेतिर घोराहीस्थित…
‘जीवन बदल्नेहरु’ सार्वजनिक
काठमाडौं, १ असोज । कमलरी प्रथाको इतिहास, मुक्त कमलरीका संघर्ष र सफलताका कथा समेटिएको पुस्तक ‘जीवन बदल्नेहरु’ शुक्रबार ललितपुरमा सार्वजनिक गरिएको छ । कान्तिपुरकर्मी दुर्गालाल केसीले लेखेको उक्त पुस्तक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी…
‘केही समीक्षा र केही अनुभूति’को समीक्षा
दाङ, २५ भदौ । साहित्यकार शिवराज पन्थीको पुस्तक केही समीक्षा केही अनुभूतिको समीक्षा गरिएको छ । राप्ती साहित्य परिषद् दाङ शाखाको नियमित कार्यक्रम कृति समीक्षाको १ सय २० औं श्रृंखलामा पन्थीको पुस्तक…
एकैसाथ तीन कृति सार्वजनिक
रोल्पा, २५ भाद्र । रोल्पा लिबाङमा शुक्रबार (भाद्र २५ गते) ३ वटा कृति सार्वजनिक भएका छन् । नागी साहित्य परिषद्ले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ३२ जना रोल्पालीको संयुक्त गजलसंग्रह ‘अमर…
साहित्यमा महकको देशप्रेम
ए जिउँदै मरेका मूर्दा हो हिजो तिमीहरुले भनेका होइनौ– एक रुपैयाँको के पो आउँछ र ! आज त्यही एक रुपैयाँको सलाई कोरेर तिम्रो दाहसंस्कार हुँदैछ । माथि उल्लेखित कविताका हरफहरुसँगै कवि…
SelectaMonth Click to Select April 2018 March 2018 January 2018 April 2017 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014
SelectaCategory Click to Select Ads-full-below Ads-middle Audio Video कथा कला–संस्कृति कविता कुराकानी निबन्ध पुस्तक फोटो फिचर बहस ब्रेकिङ विज्ञापन शैली समाचार स्मृति
कसरी भएको थियो जंगलबाट रेडियो प्रशारण ?
कुरुक्षेत्रः द्वन्दका कथा
नारीप्रधान उपन्यास आशा
सामाजिक न्याय र संवेदनाको खोजी
राप्ती साहित्य परिषद्ले १८ स्रष्टालाई पुरस्कृत गर्ने
बेड नं. १३